घले राजा र धुञ्चे गाउँ
भदौ १, २०७५ | रसुवा
रसुवा धुन्चे गाउँको पुरानो नाम दुङल्हाङ हो । दुङल्हाङको अर्थ शङख ठड्याउने भन्ने हुन्छ । उहिले गोरखाको बारपाकमा एक जना घले राजा (ग्याल्बो) थिए । उनीहरू बौद्ध धर्मको तान्त्रिक विद्यामा निकै शक्तिशाली थिए । ती राजाका धेरै भाइ छोरा थिए । उनले केही छोरालाई अन्य उपयुक्त ठाउँ खोजेर पठाउन चाहे । ती मध्ये एकजना छोरालाई बोलाएर भनेछन् : म मन्त्र गरेर यो शङ्खलाई यहाँबाट फाल्छु । त्यसलाई खोज्दै जानु र त्यहाँ शङ्ख फेला पर्छ । तिमीले त्यो ठाउँको राजा भएर राज्य चलाउनु । त्यसपछि घले राजाले मन्त्र गरेर शङख त्यहाँबाट उडाइदिए । शङख आकाशमा उड्यो । राजाका छोरा ठिसुम देप्के घले आफ्ना पिताले पालेको शङख खोज्दै आए । बारपाकबाट धादिङको तिप्लिङ हुँदै शङख खोज्दै हालको धुन्चे पछाडिको ब्राबल आइपुग्दा अग्लो भिरको टुप्पोमा आकाशतर्फ ठडिएर बसेको अवस्थामा शङख फेला पर्यो । ढुङे भिरको टुप्पोमा शङख फेला परेको हुनाले भिरको नाम पनि दुङल्हाङमो राखियो ।
दुङल्हाङमोबाट ‘दुङल्हाङ’ नाम रहन गयो । ठिसुम देप्केले शङख पाएपछि आफूलाई राजा घोषित गरेर गोङगाङ भन्ने ठाउँमा दरबार बनाए । या वंशका तामाङलाई काजी पद दिए ।
तितुङ वंशका तामाङले बाम्बो (झाँक्री) भएको काम गर्ने भए । तिनलाई पण्डित पद दिई पुजारीको काम सुम्पियो । पुजारीले गाउँको नेदा, शिप्दा र घ्युल्साङ (सिमेभुमेंं) को पूजा गर्ने भएकोले जाँडरक्सी नखाने भयो । ऊ बेलादेखिको परम्पराले अहिले पनि घले, थोकर, तितुङ वशिका तामाङहरुले धुन्चेमा चलाइरहेका छन् ।
देप्केपछि उनका सन्तानहरुले गोङगाङ दरबारमा लामो समय शासन चलाए । यो दरबार कृषि वागबानी फार्म र चरन विकास जाने बाटो पासाङल्हामु राजमार्गमा पर्छ । सडक निर्माण गर्दा भएको असावधानीले दरबारका ढुङगाहरू भत्किएका हुनाले दरबारको भग्नावशेष प्रष्ट छैन । दुङल्हाङ शब्द अहिले पनि केरुङ जोङखोर ल्हासासम्म चिनिन्छ ।
धुन्चे गाउँमा दुई किसिमका घलेहरू छन् । एउटा ग्याल्दाङ घले र अर्को बोङजो घले । ग्याल्दाङ घले ठिसुम देप्केका सन्तान हुन्, यी घलेहरू राँगो, भैंसी, गाई, गोरु, बंगुर, सुङगुर र कुखुराको मासु, अण्डा, लसुन, छ्यापी केही पनि खाँदैनन् । यस्ता खानेकुरा खानाले अशुद्ध भई आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुदैन भन्ने विश्वास रहेको छ ।
बोङजो घलेका दरबार जोङचेत भन्ने ठाउँमा छ । यो दरबार धेरै पुरानो भनिन्छ । यो दरबारको प्रथम र अन्तिम राजा को थिए ? भन्ने सम्झना कसैमा छैन । तर दरबारका भग्नावशेषहरू अझै सुरक्षित छ ।
दरबार क्षेत्र हालको हिमालय स्प्रिङबाट र सँगैको ढुङ्गाको ओडार रहेको भनाइ छ । बोङजो घलेको उत्पति स्थल गोल्जुङ र गत्लाङ बीचको माथिको बोङजो लेक (बोङजोल्आ) नै हो भनिन्छ । बोङजो घले पनि गाई, गोरु, बङगुर, सुङगुर र कुखुराको मासु छ्यापी लसुन खादैनन् । कतै झुक्किएर गाई, गोरुको मासु पकाएको भाडाकुडा नपखलिकन वा डाडु पन्युले छोएको शंंका लाग्यो वा मुखमा त्यस्ता पर्यो भने अशुद्ध भई विमारी हुने उनीहरुको अनुभव छ ।
- जैविक विविधता संरक्षण पर्यटन पुस्तकबाट
सरस्वती न्याैपाने | संचारकर्मी हुन् |
सरस्वती न्याैपाने बाट थप
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले गरे एकीकृत भन्सारको शिलान्यास
राम्चेमा स्वास्थ्य सम्बन्धि तालिम
मेगाले दिए क्यूआर कोड
शैक्षिक एवं सरसफाइ सामाग्री वितरण
एकललाई कृषि सामग्री